Ungaliqhakambisa Kanjani Ibhizinisi Lakho, Isayithi, Nohlelo Lokusebenza kwe-Apple | Martech Zone
Izindaba ze-Apple ezikhubaza i-its imizamo yokusesha yizindaba ezijabulisayo ngombono wami. Bengihlala nginethemba lokuthi iMicrosoft ingancintisana neGoogle… futhi ngidumele ngokuthi iBing ayikaze ithole umncintiswano obalulekile. Nge-hardware yabo kanye nesiphequluli esishumekiwe, ungacabanga ukuthi bangathola isabelo semakethe esiningi. Angiqiniseki ukuthi kungani bengakakwenzi lokho kepha iGoogle ilawula ngokuphelele imakethe nge-92.27% isabelo semakethe… Kanti iBing ine-2.83% nje.
Ngibe umlandeli we-Apple iminyaka eyishumi, ngenxa yomngani omuhle ongithengela enye ye-AppleTV yokuqala. Lapho ifemu yesoftware engangiyisebenzela ifuna ukutholwa kwe-Apple, mina (nomngani wami uBill) lapho abantu ababili bokuqala enkampanini basebenzisa ama-laptops eMac. Angikaze ngibheke emuva. Abantu abaningi engibaziyo abagxeka i-Apple bazogxila kumkhiqizo othile futhi bangaphuthelwa isithombe esikhulu… i-Apple ecosystem. Uma usebenzisa imikhiqizo ehlukahlukene ye-Apple ekhaya noma emsebenzini, isipiliyoni esingenamthungo, ukuhlanganiswa, nokusetshenziswa kuzo zonke akunakuqhathaniswa. Futhi akuyona into i-Google neMicrosoft abangancintisana nayo.
Amandla we-Apple ukukhulisa ukunemba kwemiphumela yami yokusesha ngokususelwa ku- Ama-iTunes, i-AppleTV, i-iPhone, i-Apple Pay, i-Mobile App, iSafari, i-Apple Watch, iMacBook Pro, neSiri ukusetshenziswa - konke okuxhunywe nge-akhawunti eyodwa ye-Apple - kuzobe kungenakuqhathaniswa. Ngenkathi iGoogle igxila ngaphandle ezinkomba zokuma… I-Apple ingakwazi ukusebenzisa idatha efanayo, kepha bese ihlanganisa imiphumela nokuziphatha kwamakhasimende ayo ukuqhuba ukukhomba okungcono kakhulu nokwenza ngezifiso.
Injini Yokucinga ye-Apple Isivele Ibukhoma
Kubalulekile ukusho ukuthi injini yokusesha ye-Apple ayisekho amahemuhemu. Ngezibuyekezo zakamuva ezinhlelweni ezisebenzayo ze-Apple, i-Apple Ukubukeka inikeza ukuseshwa kwe-inthanethi okukhombisa amawebhusayithi ngqo - ngaphandle kokusebenzisa noma iyiphi injini yokusesha yangaphandle.
I-Apple ikuqinisekisile ukuthi ikhasa amawebhusayithi emuva ngo-2015. Ngenkathi ingekho injini yokusesha esuselwa esipheqululini, i-Apple bekufanele iqale ukwakha ipulatifomu yokuthuthukisa uSiri - umsizi wayo ongokoqobo. ISiri iyingxenye yezinhlelo zokusebenza ze-iOS, i-iPadOS, i-watchOS, i-MacOS, ne-tvOS isebenzisa imibuzo yezwi, ukulawula okususelwa kokuthinta, ukugxila kokulandelela, kanye nesixhumi esibonakalayo solimi lwemvelo ukuphendula imibuzo, ukwenza izincomo, nokwenza izenzo.
Amandla amakhulu kaSiri ukuthi avumelana nokusetshenziswa kolimi ngakunye kwabasebenzisi, ukusesha, nokuncamelayo, ngokuqhubeka nokusetshenziswa. Yonke imiphumela ebuyisiwe ihlukanisiwe.
Ungasebenzisa ifayela lakho leRobots.txt ukucacisa ukuthi ungathanda ukuthi i-Applebot ikhombe kanjani isiza sakho:
Izici Zokusekwa Kwe-Apple Search
Kukhona ukusikisela kwalokhu okuvele kushicilelwe yi-Apple. I-Apple yamukele izindinganiso zenjini yokusesha futhi yashicilela lokhu kubuka okungaqondakali kwezinto zayo ezisezingeni ekhasini layo lokusekela i- I-Applebot okukhasa:
Okuhlanganisiwe ukuzibandakanya komsebenzisi ngemiphumela yosesho
Ukufana nokufaniswa kwamagama osesho ezihlokweni zewebhu kanye nokuqukethwe
Inombolo nekhwalithi yezixhumanisi ezisuka kwamanye amakhasi kuwebhu
User amasiginali asuselwa endaweni (idatha elinganiselwe)
Izici zokwakhiwa kwekhasi lewebhu
Ukuzibandakanya komsebenzisi nokwenza okwasendaweni kuzonikeza ngamathani amaningi we-Apple. Futhi ukuzibophezela kwe-Apple kubumfihlo bomsebenzisi kuzoqinisekisa izinga lokuzibandakanya elingenzi abasebenzisi balo bangakhululeki.
I-Web to App Optimization
Mhlawumbe ithuba elikhulu kakhulu kuzoba nezinkampani ezinikezela ngohlelo lokusebenza lweselula futhi zibe nobukhona bewebhu. Amathuluzi we-Apple wokuxhumanisa iwebhu kuzinhlelo zokusebenza ze-iOS muhle impela. Kunezindlela ezimbalwa izinkampani ezinezinhlelo zokusebenza ze-iPhone ezingakusebenzisa lokhu:
Izixhumanisi zomhlaba wonke. Sebenzisa izixhumanisi zomhlaba wonke ukufaka izikimu ze-URL yangokwezifiso ngezixhumanisi ezijwayelekile ze-HTTP noma ze-HTTPS. Izixhumanisi zomhlaba wonke zisebenza kubo bonke abasebenzisi: Uma abasebenzisi bafake uhlelo lwakho lokusebenza, isixhumanisi sibayisa ngqo kuhlelo lwakho lokusebenza; uma bengenalo uhlelo lwakho lokusebenza, isixhumanisi sivula iwebhusayithi yakho eSafari. Ukuze ufunde ukusebenzisa izixhumanisi zomhlaba wonke, bheka Sekela i-Universal Links.
Ama-Smart App Banners. Lapho abasebenzisi bevakashela iwebhusayithi yakho eSafari, iSmart App Banner ibavumela bavule uhlelo lwakho lokusebenza (uma ifakiwe) noma bathole ithuba lokulanda uhlelo lwakho lokusebenza (uma lungafakiwe). Ukuze ufunde kabanzi ngama-Smart App Banners, bona Iphromotha izinhlelo zokusebenza ezinama-Smart App Banners.
Ngiyeke. I-Handoff ivumela abasebenzisi ukuthi baqhubeke nomsebenzi kusuka kudivayisi eyodwa kuya kwenye. Isibonelo, lapho upheqa iwebhusayithi kwi-Mac yabo, bangagxumela ngqo kuhlelo lwakho lokusebenza lwendabuko ku-iPad yabo. Ku-iOS 9 futhi kamuva, i-Handoff ifaka ukusekelwa okuthile kosesho lohlelo lokusebenza. Ukuze ufunde kabanzi ngokusekela i-Handoff, bona Umhlahlandlela Wokuhlelwa KweHandoff.
I-Schema.org Amazwibela Acebile
I-Apple yamukele izindinganiso zenjini yokusesha njengamafayela e-robots.txt kanye nokumakwa kwenkomba. Okubaluleke kakhulu, i-Apple nayo yamukele i- Schema.org amazwibela acebile ajwayelekile wokungeza imethadatha kusayithi lakho, kufaka phakathi i-AggregateRating, Offers, PriceRange, InteractionCount, Organisation, Recipe, SearchAction, ne-ImageObject.
Zonke izinjini zokusesha thola, khasa, futhi ukhombe okuqukethwe kwakho ngendlela efanayo, ngakho-ke ukusebenzisa izindlela ezinhle zokusebenzisa uhlelo lwakho lokuphathwa kokuqukethwe noma ipulatifomu ye-ecommerce kubalulekile. Ngokwengeziwe, noma kunjalo, ukwengeza indawo yakho kanye nohlelo lokusebenza lweselula kuhlanganisiwe kufanele kuthuthukise kakhulu ikhono lakho lokutholakala nenjini yokusesha yakwa-Apple.
Bhalisa Ibhizinisi Lakho Nge-Apple Maps Connect
Ingabe unayo indawo yokuthengisa noma ihhovisi lapho amakhasimende wesifunda adinga ukukuthola khona? Uma wenza kanjalo, qiniseka ukubhalisela i- I-Apple Amamephu Xhuma usebenzisa ukungena ngemvume kwe-Apple. Lokhu akugcini nje ngokubeka ibhizinisi lakho ku-Apple Map futhi kwenze izinkomba zibe lula, ziphinde zihlangane neSiri. Futhi-ke, ungafaka ukuthi wamukela noma cha Apple Pay.
Ungahlola Kanjani Isiza Sakho nge-Apple
I-Apple inikela nge- ithuluzi elilula ukukhomba ukuthi ngabe isiza sakho singabhaliswa yini futhi sinamathegi ayisisekelo wokutholwa. Kwisayithi yami, ibuyise isihloko, incazelo, isithombe, isithonjana sokuthinta, isikhathi sokushicilela, nefayela le-robots.txt. Ngoba anginalo uhlelo lokusebenza leselula, kubuye kwabuya ukuthi bengingenalo uhlelo lokusebenza oluhambisana nalo:
Qinisekisa isiza sakho nge-Apple
Ngibheke phambili ku-Apple ukuhlinzeka nge-console yokusesha yamabhizinisi ukulandelela nokwenza ngcono ukutholakala kwawo emiphumeleni yosesho lwe-Apple. Uma benganikezela ngamamethrikhi wokusebenza weSiri Voice, kungaba ngcono kakhulu.
Anginathemba njengoba i-Apple ihlonipha ubumfihlo ngaphezu kwe-Google… kepha noma yiliphi ithuluzi lokusiza amabhizinisi ngokwenza ngcono ukubonakala kwawo lizokwaziswa!
Tags: i-apulai-apula botamamephu we-apulaI-Apple Maps iyaxhumaumholo we-apulasearch apulainjini yokusesha ye-apulai-apple watchamahlumelai-appletviOSiphoneitunesuhlelo lokusebenza lweselulasafariukusesha ngezwi
I-Excel Formula Yokuhlela Ukubuyekezwa Komphakathi ngosuku lweviki